Waa maxay Xayeysiinta Barnaamijku & Suuqgeynta? | Martech Zone
Jimco, Juun 12, 2015 Isniin, Oktoobar 12, 2015 Douglas Karr
Tikniyoolajiyadda suuqgeynta waa ay socotaa hadda dad badanna xitaa ma ogaan karaan. Warbaahinta dhijitaalka ah waxay ku bilaabatay isgaarsiinta iyo suuq geynta warbaahinta. Tusaale ahaan waxay noqon kartaa in shirkad ay sameysan doonto jadwalka waxyaabaha ay ka kooban tahay, iibinta, xayeysiinta iyo boostada. Waa laga yaabaa inay wax ka beddelaan oo ay u habeeyaan gaarsiinta iyo heerka ugu fiican ee guji, laakiin in ka badan ama ka yar ayaa lagu soo gudbiyay jadwalka ganacsiga - maahan hoggaanka ama macaamilka.
Qalabaynta suuqgeynta ayaa keentay fursad ay ku kala soocdo macaamiishaada shakhsiyaad gaar ah, u horumariso waxyaabaha si gaar ah iyaga loogu talagalay - xitaa la shakhsiyeeyo, oo loogu geeyo jadwal nidaamsan oo meesha ku kicin kara dhaqankooda ay ku go'aamin doonaan jadwalka xiga. Si kale haddii loo dhigo, astaanta iyo nolosha ayaa wali ku tiirsanaa suuqleyda. Xaqiiqdii, waxay ku saleysneyd cilmi baaris badan iyo falanqeyn… laakiin macmiilku wali mas'uul kama aheyn dariiqa ay ku beddelanayaan.
Ku qor xog weyn. Awoodda lagu dabaqi karo barashada mashiinka iyo falanqaynta xogta waqtiga-dhabta ah ayaa u oggolaaneysa xalalka tikniyoolajiyada suuq-geynta inay horumariyaan jadwalka saadaalinta oo leh saxnaan sare. Hadda macmiilku wuxuu dhex dhexaadin karaa noloshooda shakhsi ahaaneed ee shakhsi ahaaneed halkaasoo isbeddelada dabeecadaha ah ee ku lug leh ka-qaybgalka khadka tooska ah, ka-qaybgalka khadka tooska ah, moobiilka iyo bulshada ay u dhaqaajin karaan waddada beddelashada Horusocodyo qurux badan oo xiiso leh oo shaki la'aan beddeli doona suuq-geynta, kordhin doona dib-u-soo-celinta maalgashiga, iyo yareynta riixitaanka iyo jiidashada xiisadda waxaan u muuqanaa inaan ku dabaqno rajadayada iyo macaamiisheena.
Waa maxay Suuq-geynta Barnaamijku
Erayga Warbaahinta barnaamijka (Sidoo kale loo yaqaan suuqgeynta barnaamijka or barnaamij xayeysiis) wuxuu ka kooban yahay teknoolojiyad fara badan oo otomatig ah iibsashada, meeleynta, iyo hagaajinta agabka warbaahinta, isla markaana beddelaya hababka aadanaha ku saleysan. Nidaamkan, wada-hawlgalayaasha sahayda iyo dalabku waxay adeegsadaan nidaamyo otomaatig ah iyo qawaaniin ganacsi si loogu xayeysiiyo xayeysiinta tiknoolajiyadda elektaroonigga ah ee la beegsanayo Waxaa la soo jeediyay in warbaahinta barnaamijyadu ay tahay dhacdo si dhakhso leh ugu soo kordhaysa warbaahinta adduunka iyo warshadaha xayeysiinta. Wikipedia.
Xayeysiinta ayaa hadda laga heli karaa dhammaan barnaamijyada warbaahinta bulshada. Xal kastaa wuxuu leeyahay ikhtiyaarro si gaar ah loo-habeyn karo oo la beegsan karo oo ku tiirsan astaanta, dabeecadda, goobta juqraafi, ama xitaa qalab. Tani waxay fursad u siineysaa suuqleyda inay horumariyaan xayeysiinta ku sii socota rajada una gudbeysa beddelaad. Kani waa qandaraas aad u xeel dheer iyo waqti helis ka fudud dib u soo kabashada qorshayaasha.
Suuqgeynta barnaamijka waxay u oggolaaneysaa suuqley inuu dejiyo ka faa'iideysiga barxadda si loo wanaajiyo bartilmaameedka, dalabyada iyo fulinta si loo kordhiyo soo noqoshada maalgashiga. Tirada raadadka waa la kordhin karaa halka kharashka macdanta `` lead '' ay sii wadi karto in lagu hagaajiyo kharashka ugu yar. Yieldr waa mid ka mid madal noocaas ah.
Nidaamyada xaraashka ee la maareeyay ayaa soo jiray in muddo ah, laakiin intabadan waxay ahaayeen kuwo cakiran oo aan la isku halleyn karin. Waqtiga aad ogaatay waxa ka qaldan dejintaada, waxaa laga yaabaa inaad miisaaniyaddaada qarxisay. Horumarka dhanka teknolojiyadda xogta iyo waliba xogta macluumaadka laga helo ayaa awood siineysa jiil cusub oo barnaamijyada suuqgeynta barnaamijyada hoos u dhigaya halista barnaamij xayeysiis la xidhiidha nidaamyadii shalay. Barnaamujyada xayeysiinta ee warbaahinta bulshada ayaa inta badan ku habboon suuqgeynta barnaamijyada sababtoo ah dabacsanaanta iyo mugga iyo xogta la heli karo.
Soo saarida infographic ugu dambeeyay wuxuu sharxayaa shan ka mid ah shabakadaha ugu waa weyn ee warbaahinta bulshada iyo faa'iidooyinka ku soo biirista barnaamij barnaamij.
Tags: qandaraas toos ahxog weynDatabarnaamij xayeysiissuuqgeynta barnaamijkawarbaahinta barnaamijkaiibsadaha xayeysiiska warbaahinta bulshadaxayeysiiska warbaahinta bulshada ayaa iibsanayaxayeysiiska warbaahinta bulshadaxayaysiinta warbaahinta bulshadaxogta warbaahinta bulshadadhali
Feb 1, 2016 markay ahayd 5:04 PM
Aaway Xogta Weyn ee ka imaaneysa taas oo kaxeyn doonta xayeysiinta barnaamijka?
Feb 1, 2016 markay ahayd 8:01 PM
Peter, waa isku-darka xogta habdhaqanka bogga ee lagu qabtay barnaamijyada dhinac saddexaad, xogta dadka iyo goobta ka baxsan goobta, safafka bulsheed, taariikhda raadinta, taariikhda iibsiga iyo ku dhowaad ilo kale. Barmaamijyada barnaamijyada ugu waaweyni hadda way isku xidhan yihiin oo waxay aqoonsan karaan dadka isticmaala barta iyo xitaa qalabka iskutallaabta!